धरापमा अनमोलको स्टारडम : अनमोलले यस्तै फिल्म खेलिरहने हो भने उनको ओरालो गति निक्कै तीव्र हुनेछ ! – Etajakhabar
धरापमा अनमोलको स्टारडम : अनमोलले यस्तै फिल्म खेलिरहने हो भने उनको ओरालो गति निक्कै तीव्र हुनेछ !
काठमाडौं – एक वर्षअघि भारतमा कमेडियनद्वय कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोबरबीच विवाद चुलिएको बेला बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले स्टारडममाथि निकै घतलाग्दो अभिव्यक्ति दिएका थिए । कपिललाई सुुझावस्वरुप आफ्नो अनुुभव सुनाउँदै भनेका थिए, ‘मान्छेले सधैँ आफ्नो स्टारडमलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ । म अहिले करिअरको यस्तो घडीमा छु कि अक्सर मान्छे मेरो काममा ‘हो मा हो’ मिलाउँछन् । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ आफू सही दिशामा छु या गलत, मलाई ठम्याउनै मुस्किल पर्छ । त्यसैले म आफ्नो परिवार र साथीहरुको सुुझावलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिन्छुु किनभने उनीहरु नै हुन्, जसले मलाई जमिनमै टिकाइरहन्छन्, हावामा उड्न दिँदैनन् ।’
नेपालमा अहिले जताततै अनमोल केसीको चर्चा छ । उनकै हाइहाइ छ । फिल्म इन्डस्ट्रीसँग जोडिएका बहुमत अहिले उनीसँग काम गर्न लालायित छन् । उनी नेपाली फिल्मका दर्शकलाई हलसम्म तान्ने चुम्बक बनेका छन् । उनलाई भेट्न, सँगै फोटो खिचाउन युवायुवतीको ठूलो समूह मरिहत्ते गर्छन् । वास्तविकता यही हो– अनमोल यतिखेर नेपाली फिल्मीनगरीका स्टार हुन्, उनको गजबको स्टारडम देखिएको छ । यस्तो स्टारडमले फिल्मको अर्थतन्त्र एक्लै धान्न सक्छ । अघिल्ला फिल्ममा लगातार ‘चकलेटी लुक्स’मा देखिएका उनी यसमा ‘एंग्री लुक्स’मा छन् । पाँचौँ फिल्मसम्म आइपुग्दा अनमोलको अभिनयमा कुनै उन्नति देखिँदैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ११, २०७४ समय: १८:३०:०४